नेताका गलामा कोरोना भगाउने कार्ड !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ कम्पनीबाट किनेर नेताहरूले केही दिनयता ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ लगाइरहेका छन् जब कि कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने कुनै औषधि र प्रविधि विकास नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
कोरोनासम्बन्धी जुनसुकै प्रविधि वा औषधि प्रयोगमा लैजानुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेमा बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ कम्पनीले आफूखुसी ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ बेचिरहेको छ ।
असार १३, २०७७ मकर श्रेष्ठ, स्वरूप आचार्य, जयसिंह महरा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत सबैजसोले गलामा नीलो डोरीसहितको एउटा कार्ड भिरेका थिए ।
कम्पनीले व्यक्तिगत रूपमा लिनेलाई प्रतिकार्ड ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । संसद् र समितिको बैठकमा सांसद यो कार्ड लगाएर उपस्थित हुन थालेपछि नेकपाका अरू सांसदले एकपछि अर्को खरिद गरेका हुन् । अधिकांश सांसदले विकास समिति सभापति खड्काको सम्पर्कमा पुगेर कार्ड किन्ने गरेका छन् । ‘मलाई कहाँ पाइन्छ यो कार्ड भनेर सोध्नुहुन्छ, मैले छोराको नम्बर दिने गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।
कम्पनीका प्रमुख केसीले अन्य मुलुकमा यस्ता कार्ड प्रयोगमा रहेकाले नेपालमा पनि भित्र्याएको बताए । कोरोनाबाट बच्ने कार्ड भन्दै बिक्री गर्नुअघि उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमतिसमेत लिएका छैनन् । ‘विश्वमा कोरोनाबाट बच्ने यस्ता कार्डलगायत जे पत्ता लागे पनि हामीलाई जानकारी आउँछ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, ‘यस्ता कुनै पनि कार्डले मान्यता पाएका छैनन् । नेपालमा बिक्री भइरहेको बारे हामीलाई थाहा छैन ।’ उनका अनुसार कोरोनासम्बन्धी जुनसुकै प्रविधि वा औषधि प्रयोगमा लैजानुअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ । तर मन्त्रालयमा कतैबाट पनि निवेदन आएको छैन ।
कार्ड बिक्रेता केसीले भने अमेरिकाको एफडीआईजस्ता संस्थाबाट मान्यता प्राप्त सामान बिक्री गरिरहेको दाबी गरे । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनले नेताहरुले गलत सन्देश जाने कार्ड लगाउँदा जनतामा समेत असर पर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुले नै लगाएपछि अरूले पनि लगाउँछन् । कोरोना लाग्दैन भनेर सचेतनासमेत अपनाउन छाड्दा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
कार्ड भिरेर संसद् र समिति बैठकमा सहभागी
कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सांसदहरू संसद् र समितिका बैठकमा सहभागी भइरहेका हुन् । केही दिनयता उनीहरूले ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ लेखिएको नीलो कार्ड घाँटीमा भिरेर सिंहदरबार र बानेश्वरको संसद् भवन आउजाउ गरिरहेका छन् । यो कार्ड लगाउने सांसदहरूमा सत्तारूढ नेकपाका बढी छन्, विपक्षी दलका सांसदहरूले भने अक्कलझुक्कल लगाएको देखिन्छ ।
कार्ड लगाउँदा कुनै पनि भाइरस १ मिटर पर नै रोकिने उक्त कार्ड भिडाउनेले सुनाएको दाबी सांसदहरू सुनाउने गर्छन् । कार्ड दिने व्यक्तिले मास्क पनि लगाउनु पर्दैन भनेको उनीहरूले बताए । तर उनीहरुले मास्क लगाउन भने छाडेका छैनन् । नेकपा सांसद मोहन बानियाँले संसद् भवन अगाडि उक्त कार्ड किनेको बताए । ‘चीनबाट आएको हो । संसद् भवनको अगाडि बेच्न ल्याएको थियो । बेच्नेले मच्छर धूपले १ मिटर आसपासमा मच्छर भगाएजस्तो गरी यो कार्डले कोरोना भगाउँछ भन्यो,’ उनले भने । सांसदहरुका अनुसार कार्ड बेच्नेले चीनले विद्यालय र अफिसमा अनिवार्य गरेको बताएका छन् । ‘एकपटक खोलेर लगाएपछि एक महिना काम गर्ने भन्ने छ,’ नेकपाकै सांसद गणेश पहाडीले भने ।
सांसद झपट रावलले आफूले ४ वटा कार्ड किनेको बताए । ‘संसद्मा सबै साथीले कार्ड लगाएको देखेँ । केहीले यो लगाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । १ मिटरसम्म भाइरस आउन दिँदैन पनि भन्नुभयो । कोरोनाभन्दा पनि कुनै भाइरसलाई नआउन दिने भनिएकाले लगाएको हो,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालयका चिकित्सकलाई पनि सोधेको थिए । उनीहरूले राम्रै हुन्छ, लाउनुस् भन्नुभयो ।’ नेकपाकै सांसद लक्ष्मी चौधरीले भाइरस रिमुभिङ कार्डले एन्टिबायोटिकको जस्तै काम गर्छ’ भन्ने सुनेपछि आफूले पनि लगाएको बताइन् ।
कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले भने आफन्तले जापानबाट ल्याइदिएको बताइन् । ‘भदाले जापानबाट ल्याएर दिनुभएको हो । एउटा मात्रै बाँकी रहेछ । सबैभन्दा बढी बाहिर हिँड्ने म भएकाले दिनुभएको हो । एक महिनासम्म यो कार्डले कोरोना भाग्छ रे,’ उनले भनिन्, ‘यो भर्खरै निस्किएको भन्ने छ । सबैले लगाएका छन् । त्यसैले मैले पनि लगाएँ ।’
सांसद पहाडीले भने उक्त कार्डले कोरोना भाइरसलाई एक मिटर परै रोक्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिएको छैन, नेपालमा खुलम् खुला बिक्री वितरण भएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकले प्रमाणीत नगरी लगाउँदा त सुरक्षित महसुस नहुने रहेछ । यो लगाएपछि मास्क लगाउनु पर्दैन भन्छन् तर हामीले मास्क लगाइरहेका छौं ।’
संसदीय समिति सभापति खड्का र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि लगाएकाले आफूहरूले लगाएको सांसदहरूले बताएका छन् । खड्काले भने आफूले उक्त कार्ड लगाएर संसदीय समितिमा आएपछि अरू सांसदले चासो व्यक्त गरेको बताइन् । ‘मेरो छोराले चीनबाट सामान सप्लाई गर्छ । यही क्रममा भाइरस रिमुभिङ कार्ड पनि ल्यायो । त्यही कार्डले मैले लगाएपछि अरू माननीयले पनि सोध्नुभयो । मैले कसैलाई लगाउनुस् भनेको होइन,’ उनले भनिन् ।
‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक’
एफडीएले भने मार्च ८ मा एउटा सूचना नै प्रकाशन गरेर ‘क्लोरिन डाइअक्साइड’ युक्त कुनै पनि सामग्रीले कोभिड–१९ बाट जोगाउन सक्ने तथ्य हालसम्म कहीँकतैबाट पनि पुष्टि नभएको जनाएको देखिन्छ । त्यस प्रकारको सामग्रीको बिक्रीवितरण गरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्तै अमेरिकाको इन्भारोमेन्टल प्रोटेक्सन संस्थाले समेत यस प्रकारका सामग्रीले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।
नेपालमा मात्र नभई धेरै राष्ट्रमा यस प्रकारको सामग्रीको व्यापार अहिले ह्वात्तै बढेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीद्वारा सम्प्रेषित समाचारमा उल्लेख छ । एक समाचारअनुसार रुसका राष्ट्रपतिका प्रवक्ता, बोलेभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति, लेबनानी नेताहरुले समेत यस्ता सामग्री प्रयोग गरेका छन् ।
अमेरिकी संस्था एफडीएका अनुसार क्लोरिन डाइअक्साइडयुक्त सामग्रीको असुरक्षित प्रयोगले मानिसको ज्यानैसम्म जाने खतरा रहन्छ । सो रसायनका कारण श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या आउनुका साथै मुटुको चालमा गडबडी, रक्तचापमा कमी, डिहाइड्रेसन (शरीरमा पानीको कमी), रगतमा क्षय, गम्भीर प्रकारको झाडाबान्तासमेत हुन सक्छ । प्रकाशित : असार १३, २०७७ ०६:२०
१६८ किलोग्रामकी महिलाले स्वस्थ शिशु जन्माइन्
आमा र छोरी दुवै स्वस्थ
काठमाडौँ — काठमाडौंकी १ सय ६८ किलोग्रामकी एक महिलाले स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल थापाथलीमा उनले शुक्रबार शिशुको जन्म दिएकी हुन् ।
बाँझोपन रोग विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोसकोपिक सर्जन डा. नूतन शर्माका अनुसार असार ११ गते ३१ वर्षीया ती महिलाको शल्यक्रिया गरेर २.९५ किलोग्रामको स्वस्थ शिशु जन्माइएको हो ।
‘मेरा लागि नयाँ अनुभव हो, असाधारण तौलले गर्दा यो प्रसूति प्रक्रिया जटिल र जोखिमपूर्ण थियो,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘मुलुकमा शल्यक्रियाले १ सय ६८ किलोग्रामकी महिलाको प्रसूति भएको सम्भवत: यो नै पहिलो पटक हो ।’ मोटोपनले गर्दा गर्भाधान सहज नहुने भनिए पनि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर ती महिलाले सन्तान जन्माएको डा. शर्माले बताइन् । सामान्य महिलाको दाँजोमा तेब्बर तौल भएकी ती महिलालाई कुनै शारीरिक रोग थिएन । ‘उनमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वासको समस्या, हाइपोथाइराडिज्म आदि कुनै समस्या थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आमा र छोरी दुवै स्वस्थ छन् ।’
ती महिलाको प्रसूतिका क्रममा निकै सावधानी अपनाइएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘सामान्य रक्तचाप नाप्ने मेसिनको बेल्ट लगाउन सकिएन, विशेष प्रकारको उपायमार्फत रक्तचाप नाप्नुपर्‍यो,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘उनको तौल धेरै भएकाले विशेष एनेस्थेटिस्टको सहयोग लिनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार शल्यक्रिया गर्दा सामान्य गर्भवती महिलामा एकदेखि डेढ इन्चसम्म बोसो देखिन्छ । यी महिलामा भने निकै बढी देखिएको थियो ।
सामान्य महिलाको गर्भाधारणपछि अधिकतम तौल ७० देखि ८० किलोग्रामसम्म पुग्ने गरेको छ । डा. शर्माका अनुसार औसत महिलाको गर्भधारणपछि अधिकतम १२ देखि १५ किलोग्राम तौल बढ्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतमले आफ्नो २६ वर्षे करिअरमा अधिकतम १ सय २५ किलोग्रामसम्मको महिलाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको अनुभव सुनाए । ‘योभन्दा माथिको तौल भएका महिलाको नेपालमा शल्यक्रियाबाट प्रसूति भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने ।
गिनिज वर्ड रेकर्डस् डटकमका अनुसार सन् २००७ को फेब्रुअरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाकी २ सय ४१ किलोग्राम तौल भएकी डोना सिम्पसनले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । उच्च जोखिमयुक्त शल्यक्रियाबाट हुने प्रसूति प्रक्रियाअन्तर्गत डोनालाई प्रसूति गराउन ३० चिकित्साकर्मीको टोली खटिएको डेली मेलले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार १३, २०७७ ०६:११